Al-Shabaab oo soo bandhigay Sarkaal ciidanka Militariga soomaaliya oo ay gacanta ku dhigeen(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Ururka Al Shabaab ayaa soo bandhigay Sarkaal ay sheegeen in uu ka tirsan yahay Ciidamada Dowladda Federalka Somaliya, kaasi oo laga qabtay duleedka Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha hoose.
Shabaabka waxa ay soo bandhigeen Sawiro muujinaya Sarkaalkaan ka tirsan ciidamada Dowladda oo xiran direeska lagu yaqaan ciidanka, sidoo kalena garbaha ay kaga hagoogan yihiin darajada ciidanka.
Sarkaalkaan ayaa magaciisa wuxuu ku sheegay Gaashaanle Sare Muxamed Xaaji Cali, wuxuuna ka mid ahaa Saraakiisha ciidamada Militariga ee ka howlgasha Gobolka Shabeelaha hoose.
Xilliga ciidamada Shabaab ay gacanta ku dhigaayeen Sarkaalkaan, ayaa wuxuu watay gaari yar oo noociisa ah Kaarib, nambarka taarikadiisa ay tahay AB 7211.
Idaacada Andalus ee ku hadasha Afka Ururka Shabaab ayaa wareysatay Sarkaalkaan, waxaana uu sheegay in uu la soo shaqeeyay Dowladihii dalka soo maray ilaa Dowladii Maxamed Siyaad Barre.
“Magaceygu waa Muxamad Xaaji Cali, waxaan ahay Sarkaal gaashaanle sare ah, waxaan ka tirsanahay ciidanka dowladda, Sidoo kalena waxaan la soo shaqeeyey dowladihii hore ee soo maray dalka oo ay ka mid tahay dowladdii Siyaad barre.” Ayuu yiri Gaashaanle Sare Muxamad Xaaji Cali.
Lama oga go’aanka ay ka qaadan doonaan Sarkaalkaan ka tirsan Ciidanka Dowladda ee u gacan galay Shabaabka, xilli ay ka qabteen duleedka Degmada Afgooye.
Sida lagu yaqaan Shabaabka Saraakiisha iyo Askarta ciidamada Dowladda ee ay gacanta ku dhigaan si arxan daro ah ayeey u dilaan, qaarkoodna qoorta ayeeyba ka jaraan.
GolahaSiyaasaddaIsbedel-doonka Beelweynta Banaadiriga oo warsaxaafadeed ka soosaaray MadashaWadatashigaHiigsiga 2016 Iyo DhisiddaMaamul-Gobaleedyada(Daawo Sawirada)